Mihantsy Ny Fankahalan’i Makedonia Ireo LGBT Ny Hetsika Fanentanana ‘Olombelona Koa Ireo Mpankahala Pelaka’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2019 16:48 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, русский, Español, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Janoary 2016)
Solaitrabe tany Skopje, Makedonia ”…Olombelona Koa ireo Mpankahala Pelaka”. Sary: F. Stojanovski (CC-BY).
Ho toy ny fomba iray hiadiana amin'ny fankahalana raikitapisaka ny pelaka, namoaka solaitrabe maromaro tany amin'ireo tanàna ao Skopje, Bitola, Kumanovo sy Štip ny Fiaraha-mientan'ireo ONG Makedoniana ”Zo Ara-pananahana sy Ara-pahasalamana ho an'ireo Vondrompiarahamonina Atao Ankilabao, miaraka amin'ny hafatra tsotra hoe ”…Olombelona Koa Ireo Mpankahala Pelaka,” tao anatin'ny hetsika fanentanana natomboka tamin'ny 10 Desambra, na ny Andro Natokana ho an'ny Zon'olombelona.
Araka ny nambaran'ilay fiarahamientana, ny tanjona ao ambadik'ireo solaitrabe ireo dia ny hanavahana ireo mandà ny zon'ny LGBT ho toy ny ”mila fanampiana ara-tsosialy” mba hiatrehana ireo fitsaran-dry zareo an-tendrony, indrindra araka ny fankahalana ara-drafitra an'ireo vitsy an'isa ara-pananahana ao amin'ny firenena.
Nandritra izay folo taona farany izay, nanetsiketsika ny fankahalana pelaka ny antoko mitondrana ankehitriny ao Makedonia mba ho toy ny fitaovana hanodinana ny saim-bahoaka tsy ho amin'ireo tsy fahombiazana ara-politika sy ara-toekarena. Ohatra, na dia tsy nisy mihitsy aza hetsibahoaka mba hampanarahan-dalàna ny fanambadiana pelaka tao amin'ny firenena, namoaka fanambaràna ihany ilay antoko nandritra ny fe-potoana nitondrany tao amin'ny governemanta, nitonon-tena ho toy ny ”mpiaro ny fahamendrehana nentim-paharazana”. Mandritra izany fotoana izany, misy rafitra tsimatimanota ho an’ireo heloka bevava ateraky ny fankahalana ireo olona LGBT any Makedonia.
Amin'ireo haino aman-jery an-jatony miasa ao amin'ny firenena, varavarana Aterineto tsy miankina fito irery ihany no nitatitra mikasika ilay hetsika fanentanana amin'ny solaitrabe, izay niarahana natao tamin'ny ONG Kroaty Queer Zagreb. Tsy mahagaga noho izany fa toa ratsy avokoa ny ankamaroan'ireo fanehoankevitry ny haino aman-jery sosialy mikasika ilay hetsika fanentanana.
Nanasongadina ny toe-draharaha henjana mikasika ny zon'ireo olona LGBT ny tatitra farany indrindra avy amin'ny Fiombonambe Eoropeana mikasika an'i Makedonia (pejy 60):
Mbola mijaly noho ny votoaty feno fanavakavahana sy fankahaàna any amin'ny haino aman-jery, na amin'ny aterineto na ivelan'ny aterineto, ireo vehivavy tia vehivavy, lehilahy tia lehilahy, sady tia lahy no tia vavy, nanova taovam-pananahana (LGBTI). Niseho nandritra ny fankalazana ny faha-roataonan'ny foibe fanohanana ny LGBTI ny fanafihana fahenina, izay naharatrana olona roa. Na dia teo aza ireo antso nalefan'ireo fikambanana avy amin'ny fiarahamonin'olontsotra sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena mba hanenjehana ireo nahavanon-doza, tsy mbola nisy nanaovana fanadihadiana lalina ireo fanafihana ireo na ny iray aza. Tamin'ny Aogositra, nolavin'ny Parlemanta ny volavolan-dalàna fanitsiana ny lalàna manohitra ny fanavakavahana, izay mandrara ireo rehetra endrika fanavakavahana mivantana na tsy mivantana mifototra amin'ny fironana ara-pananahana sy ny mahalahy na mahavavy. Ezaka lehibe no mbola tsy maintsy ho atao mba hampahatsiarovan-tena sy hampanajàna ny fahasamihafana eny amin'ny fiarahamonina ary hiadiana amin'ny tsy fandeferana. Tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny hetsika fanentanam-bahoaka sy fanofanana ny vondrona mpampihatra ny lalàna, mpampanoa lalàna, mpitsara ary ireo mpiasan'ny fahasalamana izany.
Maneho ity fankahalana ny pelaka ity ny lahatsary navoakan'ny fantsona fahitalavitra iray any amin'ny tanànan'i Štip taorian'ny Taombaovao. Maneho fanarahamaso iray teny an-dalana ilay horonantsary, izay ampahany amin'ny andiany ”Ireo hadisoana tsara indrindra tamin'ny 2015”, ilay mpanao gazety dia manontany ny olona :” Inona no ho ataonareo raha toa ka fantatrareo fa Homo sapiens ny mpifanolo-bodirindrina aminareo?”
Toa nafangaron'ireo olona nanontaniana tamin'ny teny hoe pelaka ilay anarana siantifika ho an'ny olombelona, ary ilay namaly voalohany nilaza hoe, ”mety ahantoko izy.”
Manazava ilay olontsotra faharoa, ”Inona no ho ataoko? Tsy hanao na inona na inona aho. Na izaho hamono azy na ho avelako hamono ahy izy. Tsy misy hafa ankoatra izay.”
Mihomehy aloha ilay olona nadinina manaraka, ary avy eo nilaza hoe, ”Raha filoha aho, hah… Afaka mivoaka ianareo, afaka midaroka azy, afaka manenjika azy eny anoloan'ny fitsarana, mitoroka azy any amin'ny polisy. Tokony haka azy ny polisy. Hitako ankehitriny fa tsy matahotra ny polisy na ny fitsarana ireny olona ireny, Hitako any anaty fahitalavitra ry zareo…”